HarmonyOS 2.0: Huawei wuxuu soo jeedinayaa inuu ka tago Google | TeraNews.net
HarmonyOS 2.0: Huawei wuxuu soo jeedinayaa inuu ka tago Google
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 06.01.2021
Sida muuqata, "masduulaagii" wuxuu ka carooday "gorgorka". Tan waxaa daliil u ah xaqiiqda ah in agaasimaha Huawei Yu ChengDong uu ku casuumay walaalihiis Shiinaha inay u wareegaan HarmonyOS 2.0. Taasi waa, gebi ahaanba ka tag adeegyada Google. Bayaanka waxba kama sheegayo qiimaha. Waxaa soo baxday in hogaamiyaha suuqa Aasiya ee Huawei uu diyaar u yahay inuu adeegyadiisa ku bixiyo si bilaash ah.
Dalabkan cajiibka ah ee aadka u soo jiidashada leh ayaa lala wadaagay dhammaan noocyada. Laakiin waxaa loogu talagalay ugu horreyn shirkadaha ku soo rogay cunaqabateynta Mareykanka. Huawei wuxuu durbaba bilaabay tijaabinta HarmonyOS 2.0 wuxuuna diyaar u yahay inuu kheyraad siiyo tartamayaasheeda. Tan waxaa si adag loogu yeeri karaa wicitaankii ugu dambeeyay ee Google. Waana iska cadahay in HarmonyOS 2.0 uu imaan doono heerka Google sanadka soo socda.
Go'aanka Huawei wuxuu hubaal u yahay wax soosaarayaasha tikniyoolajiyadda moobiilka. Iyo xitaa barnaamijyada iyo horumarinta ciyaarta. Laakiin waxa hirgelinta HarmonyOS 2.0 u rogi doono taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada ayaan caddeyn. Dhibaatada ka jirta barnaamijyada Shiinaha gabi ahaan maahan basaasnimo, laakiin waa xayeysiin. Aniguna runtii ma jecli waayo-aragnimadan, oo aan u fiicnayn isticmaalaha, inay korsadaan shirkado kale.
Maxay yihiin rajada shirkadda Huawei
Horey ayey u cadahay in cunaqabateynta Mareykanka aysan caqabad ku aheyn Shiinaha. Aad ugu eg sawirka Ruushka. Goorma, halkii ay ka dhici lahayd suuqa, gobolku wuxuu bilaabay inuu kordhiyo wax soo saarka gudaha. Macnaha guud ee Huawei, shirkaddu waxay bilowday inay barato tikniyoolajiyadda 3nm. Waxaa socda howlo lagu abuurayo processor cusub oo loo yaqaan 'Kirin 9010. Xitaa xaddidaadda gelitaanka suuqa IT-da Mareykanka ma dhibayso Shiinaha.
Dagaalkii ganacsi ee Shiinaha uu kula jiray Mareykanka ayaa horseeday in dalal badan oo aan jeclayn siyaasadaha Mareykanka ee wasakhaysan ay doortaan Huawei. Taasina waa xiisaha alaabooyinka Shiinaha iyo faleebada maalgashiga dhaqaalaha. Waxaa la rumeysan yahay in Mareykanku gebi ahaanba ka saari karo dhammaan xayiraadaha, maaddaama kobaca dhaqaalaha Shiinaha ay aad ugu liitaan iyaga. Waqtiga ayaa sheegi doona. Dhanka kale, waxaan sugeynaa sii deynta HarmonyOS 2.0.
Beelink GT-KING PRO 2021 oo leh Wi-Fi 6
TV BOXING H96 Mini H8: dib u eegis, tafaasiil, faallooyin
UGOOS AM6 Pro: dib u eegis, tafaasiil